Tetiandro hebreo: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Tetiandro hebreo: Fahasamihafan'ny versiona
Tetiandro hebreo (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Jiona 2018 à 19:52
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Aprily 2018 à 16:28 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Jiona 2018 à 19:52 (hanova) (esory)
[[Sary:Jewish calendar, showing Adar II between 1927 and 1948.jpeg|vignette|304x304px|Tetiandro jiosy maneho ny volana Adara II tanelanelan'ny taona 1927 sy 1948.]]
Ny '''Tetiandro hebreo''' dia [[tetiandro]] ampiasaina ao amin'ny fivavahana jiosy sy ny fanjakan'i Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodin'ny [[volana]] sy ny [[masoandro]] ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. Misy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerin'i Metona (filozofa grika tamin'ny taonjato faha-5). Avy amin'io tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasain'ny Fanjakana Israeliana.
== Ny fizaràm-potoana ao amin'ny tetiandro hebreo ==
==== Ny anaram-bolana talohan'ny Fahababoana ====
Ny aoAo amin'ny [[Baiboly]] dia voalaza fa ny taona iray misy 12 volana (1Mpan. 4.7 sy 1Tant. 27.1-15) ary ny soratra ao amin'ny [[Bokin'ny Genesisy|Genesisy]] dia hoatry ny milaza fa ny volana tsirairay dia misy 30 andro (Gen. 7.11; 8.3-4; 8.13-14). Hafa ny anaram-bolana nampiasain'ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] talohan'ny fahababoana fa tsy mitovy amin'ny ampiasaina amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny dia ny laharan'ny volana ao amin'ny taona no natao anaran'ny volana. Misy anaram-bolana vitsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly, dia ireo nogasina hoe ''Abiba'' (hebreo: אביב / Aviv), ''Ziva'' (hebreo: /Ziv), ''Etanima'' (hebreo: אֵתָנִים / Ethanim) ary ''Bola'' (hebreo: /Bul). Ny Abiba dia volana voalohany, ny Ziva no faharoa, ny Etanima no fahafito, ny Bola no fahavalo. Heverina ho avy amin'ny anaram-bolana kananita izy ireo.
Ny volalan ''Aviv'' (midika ara-bakiteny hoe "lohataona") dia voaresaka ao amin'ny [[Bokin'ny Eksodosy]] sy ny [[Bokin'ny Deoteronomia]] (Eks. 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Deo. 16.1). Ny volana ''Ziv'' (midika ara-bakiteny hoe "fahazavana") dia voaresaka ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] (1Mpan. 6.1; 6.37). Ny volana ''Ethanim'' (midika ara-bakiteny hoe "mahery", endrika milaza maro) dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 8.2). Ny volana ''Bul'' dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.38).
# Av (hebreo: אב) eo anelanelan'ny Jolay sy Aogositra (30 andro);
# Elul (hebreo: אלול) eo anelanelan'ny Aogositra sy Septambra (29 andro).
Ao amin'ny Baiboly dia ny volana Nisana (Nisan) no voalohany ary ny Adara (Adar) no faha-12. Ny ''Adar'' I izany dia volana faha-13 (30 andro) ka toy izao ny filaharan'ny volana ao anatin'ny taona:
* Ny ''Yom ha-Shoah'' (hebreo: יום השואה "andron'ny [[Shoa]]"); ahatsiarovana ny fandripahana [[Jiosy]] nataon'ny fitondrana [[Nazi]]; ankalazaina amin'ny 28 Nisan;
* Ny ''Yom haTsikaron'' (hebreo: יוֹם הַזִּכָּרוֹן‬ "andro fahatsiarovana"); ahatsiarovana ireo miaramila Israeliana matin'ny ady sy ny asa fampihorohoroana; ankalazaina amin'ny 4 Iyyar;
* Nhy ''Yom haAtzma’ut'' (hebtreohebreo: יום העצמאות "andron'ny fahaleovan-tena"); ahatsiarovana ny fiforonan'ny Fanjakana Israeliana; ankalazaina amin'ny 5 Iyyar;
* Ny ''Lag baOmer'' (hebreo: לַ״ג בָּעוֹמֶר‎‎ "telo amby telopolo andro ao amin'ny omera") ankalazaina amin'ny 18 Iyyar;
* Ny ''Yom Yerushalayim'' (hebreo: יום ירושלים "andron'i Jerosalema"); ahatsiarovana ny fanafahana sy ny nahazoan'ny tafika israeliana an'i Jerosalema tamin'ny taona 7 Jona 1967 (28 Iyyar taona 5727) amin'ny 28 Iyyar;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/816083"